Tredị ahịa: Nbili nke Onye Nnochite anya na Onye Okike Era | Martech Zone
2020 gbanwere ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta na ndụ ndị ahịa. Ọ ghọrọ ndụ nye ndị enyi, ndị ezinaụlọ na ndị ọrụ ibe, ọgbakọ maka ndọrọndọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ebe a na-enwe mmemme aghara aghara aghara aghara na nke ezubere iche.
Mgbanwe ndị ahụ tọrọ ntọala maka ọnọdụ ndị ga-agbanwe ụwa mgbasa ozi mgbasa ozi na 2021 na gafere, ebe itinye ikike nke ndị nnọchi anya ika ga-emetụta oge ọhụụ nke ahịa dijitalụ. Gụọnụ maka nghọta maka otu ị ga - esi lebe ndị nkwado a bara uru, ndị na - akwado ya, na ndị na - eso ụzọ ka ha rụpụta ezigbo ahịa ahịa dijitalụ maka akara gị.
Trend 1: Authentic Content Beats Studio-Mepụta Content
Ọ bụ ezie na mgbasa ozi mmekọrịta aghọwo ebe etiti ahịa ahịa, ọ bụ ihe ndị dị na ya nke na-eduga iru ndị na-azụ ahịa, karịsịa mgbe tụnyere mgbasa ozi.
Na Greenfly, anyị ahụla etu usoro izizi a si sụgharịa ụlọ ọrụ na nyiwe dị iche iche. Ndi Biden maka ndi otu ndoro ndoro ochichi choputara na ule ha nke di na mgbasa ozi ochichi omenala - nke emeputara nke oma, nke na-acho 30 nke abuo - abughi ihe di nfe karie impromptu, ihe nlere anya nke ndi ntuli aka site na iji igwe ha ma obu webcam ha kesaa ha. agụụ na ịtụ vootu.
Kọmitii Democratic Democratic tụgharịkwara na ndị na-elekọta ha iji nweta okwu ahụ na ntanetị na ntanetị maka ndị nduzi ntuli aka nke 2020, gụnyere onye bụbu onye isi ala US na onye na-eme votu Barack Obama maka ya Aga M Ekwe Ntuli mgbasa ozi.
Ntuli aka gi emetutaghi ihe kariri ugbua.
Taa bụ ụbọchị ndebanye aha ndị votu. Gaa na https://t.co/XdZz4dh82T ịdebanye aha ma mee atụmatụ ịtụ vootu. Ma gbaa mbọ hụ na onye ọ bụla ịmara mekwara. pic.twitter.com/ItarX1d4zw
Ezigbo ọdịnaya na-arụ ọrụ nke ọma dị ka ọkwa ndị ahịa. Ọmụmaatụ, na-elekọta mmadụ otu na mma aha Enwere m mmasị ịkụ ọkpọ enweela ike ime ka ume ọhụrụ dị iche iche dị iche iche iji meghachi omume na-agbanwe ngwa ngwa, ahịa mpaghara COVID-19 site na ịnakọta mmelite ọdịnaya edepụtara site na 100 nke ndị njikwa ụlọ ọrụ mpaghara ha n'ofe North America. Na Gbọ mmiri gara nke ọma ịbanye n'ime ndị otu egwuregwu na-agba ụgbọ mmiri gburugburu ụwa iji kesaa ọdịnaya ejiri na kamera ahụ n'oge asọmpi.
Akwukwo nke SailGP kesara (@sailgp)
Ndzọ nke 2: Ndị na-akwado ya abụghị ndị na-eso ụzọ - Ha bụ akụkụ nke ndị otu okike gị
Fans na-aghọ ndị na-emepụta ihe dị mma (okwu nke ụfọdụ na-ahọrọ karịa ndị na-egbu egbu) onwe ha. Ọ bụ ezie na ụfọdụ onye ọrụ-eme Ọdịdị ka ndị ahịa na-ahazi, ọ nweghị ụzọ ka mma iji kwalite ngwaahịa karịa ịkpọ ezigbo ahụmịhe sitere n'aka ndị ezigbo mmadụ.
N'etiti ọrịa na-efe efe, na-enweghị ticker-teepu Nme nghọta, ndị Los Angeles Dodgers MLB World Series Championship kpọrọ maka ememme a. Otu dijitalụ nke klọb gbakọtara karịa ndị Fans 3,500 iji nyefee vidiyo mmeghachi omume oge ha site na Greenfly, nke ha chịkọtara na ntanetị mgbasa ozi mgbasa ozi.
Anyị mere ememme. Anyị bere ákwá. Anyị meriri. #Ngụkọta pic.twitter.com/U3nLivNz7K
- Ndị Los Angeles Dodgers (@Dodgers) November 12, 2020
Mgbasa ozi a mere ka ndị otu nwee ike ijide ike niile nke ndị na-eme mmemme a na-eme ememme ma gụnye ndị na-akwado ha siri ike na mmeri ahụ.
Ndzọ 3: Social Media bụ New Arena To Grower Partner Value
Site na mmechi ụwa niile nke ihe omume dị na 2020 na mbido ekwuru na mmetụta dijitalụ gafere ókèala, mmekọrịta mmadụ na-adị ugbu a dị oke mkpa iji gosipụta onye mmekọ ROI yana inye aka mejupụta oghere oghere. N'ezie, mmadụ mgbasa ozi so n'ime ndị kasị eji ahịa ọwa rụọ ọrụ nkwado n'afọ adịbeghị anya.
Ndị mmekọ na-achọwanye ihe akaebe nke ịlaghachi na ntinye ego ha na nghọta ka ukwuu banyere otu mgbasa ozi na-enyere azụmahịa ha aka. Ndị otu na-ahụ uru a na ire ahịa, ahịa ọhụụ na-eduga, mmụba ụdị ọhụụ na nkwalite ngwaahịa ọhụrụ.
Dị ka e kwuru n'oge a na-adịbeghị anya panel Business Business Journal, usoro ise nke Major League Baseball, Na mbụ na Pete Alonso, nke Gatorade gosipụtara, jikọtara egwuregwu ihe ọverageụverageụ ihe ọ toụ toụ na baseball Fans na organic ụzọ na njikọ si YouTube chanel.
Onyinye nkwado nwere ike ịgbatị n'ihu iji mee mgbanwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ndi otu Rajasthan Royals cricket bidoro otu mkpọsa na NIINE ịdị ọcha na India, ebe enwere ezigbo ihe nlere na oge. N'oge asọmpi IPL na-adịbeghị anya, NIINE nyere ụmụ nwanyị itoolu ọkọnọ akwa nhicha ọnwa atọ maka ọsọ ọ bụla agbagoro, ngụkọta nke ọsọ 186 na ụmụ agbọghọ 1,674.
Akwukwo nke Niine (@niineindia)
ACHỤKWU NDỊ KWURU
Ezigbo, nkwenye ziri ezi, na akụrụngwa ga-akụ mgbasa ozi mgbasa ozi amanye. Chọpụta ọdịnaya ndị na-akwado ofufe ga-eme ka ụdị ndị mepụtara mkpọsa siri ike nke gafere n'ọkwa mgbasa ozi na-adịghị mma Ha ga - apụta iche n'etiti ndị asọmpi nwere nnukwu ịrịọ maka ndị mmekọ yana, na nloghachi, lee uru mgbasa ozi mmekọrịta na uru.
Tags: mgbasa ozionye nnọchianyaezigbo kọntaktịeziokwubarack obamabidenCOVID-19okikeotu otukọmitii mba onye kwuo uche yadncendorsementsọdịnaya ndị na-akwado ofufeFans-eso ụzọgatoradegriinụM hụrụ kickboxing n'anyaAga m eme votuinstagramNdị na-agbapụ Los Angelesisi baseball bọọlụahia ahiaMLBnwana mbụ na Pete alonsoNdị otu ezinụlọ nke Rajasthanụgbọ mmiriị nweta akwa nhichaelekọta mmadụ mediankwadoakwụkwọ akụkọ azụmahịaTwitterihe njirimara nke onye ọrụyoutubeYouTube chanel
Tom Kuhr bụ onye isi ahịa azụmaahịa nwere ọtụtụ ihe azụmaahịa dijitalụ, arụmọrụ ego, na mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ bụ onye agha nke mmalite mmalite nwere ọganiihu ma nyere aka bulie isi obodo, wuo ndị otu ụwa, wee mepụta mmemme azụmaahịa na mmepe azụmaahịa nke mere ka mmepe ngwa ngwa. Dị ka CMO maka Greenfly, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na egwuregwu, mgbasa ozi, ndị na-azụ ahịa, na ikike iji rụọ ọrụ na ịkwalite mmemme mgbasa ozi dị ike. Na-anọchite anya olu ndị ahịa, ngwaahịa na-emeri akara Tom na ahụmịhe ndị ahịa pụrụ iche dugara n'ọtụtụ ọpụpụ na-aga nke ọma site na IPO na nnweta.